Asomafo Nnwuma 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 20:1-38
20 Na afei basabasa no ano brɛɛ ase no, Paulo soma kɔfrɛɛ asuafo no, na bere a ɔhyɛɛ wɔn nkuran na ɔne wɔn dii nkra+ no, osii kwan so kɔɔ Makedonia.+ 2 Bere a ɔkɔfaa hɔnom na ɔkaa nsɛm bebree de hyɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no nkuran+ no, ɔbaa Hela. 3 Odii asram abiɛsa wɔ hɔ, na ɔresan akɔ no, ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔfa Makedonia mmom, efisɛ bere a ɔrebɛkɔ Siria no Yudafo no bɔɔ ne ho pɔw.+ 4 Ná wɔn a wɔka ne ho ne Beroiani Piro ba Sopata,+ Aristarko+ ne Sekundo a wɔyɛ Tesalonikafo, Derbeni Gaio, Timoteo,+ ne Tihiko+ ne Trofimo+ a wofi Asia mantam mu no. 5 Eyinom tutuu so kɔtwɛn yɛn wɔ Troa;+ 6 na paanoo a mmɔkaw nnim+ nna no akyi no, yɛtenaa hyɛn mu fii Filipi, na nnanum ntam no, yɛkɔtoo wɔn wɔ Troa;+ na yedii nnanson wɔ hɔ. 7 Da a edi kan+ wɔ nnawɔtwe no mu, bere a na yɛahyiam rebedidi no, Paulo fii ase kasa kyerɛɛ wɔn, efisɛ na obefi hɔ da a edi hɔ no; na ɔtoaa ne kasa no so kosii ɔdasum. 8 Enti ná akanea pii wɔ abansoro dan+ a yɛahyiam wom no mu. 9 Paulo gu so rekasa no, aberante bi a wɔfrɛ no Eutiko a na ɔte mfɛnsere ano no faa mu dae hatee, na nna no mu no, ofii abansoro a ɛto so abiɛsa no so bɛhwee fam, na wɔmaa no so no, na wawu. 10 Na Paulo sian kɔɔ fam kobutuw no so,+ na ɔbam no kae sɛ: “Munnyae gyegyeegye no na ne kra wɔ ne mu.”+ 11 Afei ɔforoo abansoro no, na ɔfaa aduan fii ase dii, na ɔbɔɔ nkɔmmɔ araa koduu ahemadakye, na afei ofii hɔ kɔe. 12 Enti wɔde aberante no kɔe a ɔwɔ nkwa mu, na wɔn werɛ kyekye boroo so. 13 Afei yedii kan kɔtenaa hyɛn mu kɔɔ Aso, faako a na yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛfa Paulo no, efisɛ bere a ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛnyɛ saa no, n’ankasa yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛnantew akɔ. 14 Enti bere a ɔne yɛn hyiae wɔ Aso no, yɛfaa no ne no kɔɔ Mitilene; 15 n’adekyee a yetu fii hɔ no, yɛkɔɔ Kio ntentenso, na da a edi hɔ no, yeduu Samo, na ade kyee no, yɛkɔɔ Mileto. 16 Efisɛ na Paulo asi gyinae sɛ ɔrennyina Efeso,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrensɛe bere wɔ Asia mantam no mu; efisɛ na ne ho pere no sɛ sɛ obetumi a anka obedu Yerusalem+ Pentekoste afahyɛ da no. 17 Nanso, ofi Mileto soma kɔɔ Efeso kɔfrɛɛ asafo mu mpanyimfo+ no. 18 Wɔbae no ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ankasa munim sɛnea efi da a edi kan a mebaa Asia+ mantam mu no, metenaa mo nkyɛn saa bere no nyinaa,+ 19 na mede ahobrɛase adwene+ kɛse ne nusu ne sɔhwɛ a ɛtoo me denam Yudafo pɔw+ a wɔbɔe so som+ Awurade; 20 na mamfa nea mfaso wɔ so a ɛsɛ sɛ meka kyerɛ mo biara, ne kyerɛ a ɛsɛ sɛ mekyerɛkyerɛ+ mo baguam ne afie afie+ no ankame mo. 21 Na mmom midii Onyankopɔn fam adwensakra+ ne yɛn Awurade Yesu mu gyidi ho adanse fefeefe+ kyerɛɛ Yudafo ne Helafo nyinaa. 22 Afei, hwɛ! honhom no ahyɛ me+ ma merekɔ Yerusalem, ɛwom sɛ minnim nea ɛbɛto me wɔ hɔ de, 23 nanso ɛno ara ne sɛ kurow biara mu no, honhom kronkron+ no kɔ so di me adanse sɛ mpokyerɛ ne ahohiahia retwɛn me.+ 24 Nanso, me kra ho nhia me pii+ sɛ wie a mewie me mmirikatu+ ne ɔsom adwuma+ a minya+ fii Awurade Yesu hɔ sɛ minni Onyankopɔn adom+ ho asɛmpa no ho adanse fefeefe no. 25 “Afei, hwɛ! Minim sɛ mo a mekaa ahenni no ho asɛm wɔ mo mu no nyinaa renhu m’anim bio. 26 Enti miyi mo adansefo nnɛ da yi sɛ me ho afi wɔ nnipa nyinaa mogya ho,+ 27 efisɛ mamfa Onyankopɔn agyinatu+ biara ankame mo. 28 Momma mo ani mmra+ mo ho+ ne nguankuw+ a honhom kronkron apaw mo ahwɛfo+ wɔ wɔn mu no nyinaa so, sɛ monhwɛ Onyankopɔn asafo+ a ɔde n’ankasa Ba mogya+ tɔe no so yiye. 29 Minim sɛ me kɔ akyi no, mpataku+ bɔne* bɛhyɛn mo mu a wɔrenyɛ nguankuw no brɛbrɛ, 30 na mo ara mo mu na mmarima bɛsɔre akasa akyinkyim nsɛm+ de atwe asuafo no adi wɔn akyi.+ 31 “Enti monwɛn, na monkae sɛ mfe abiɛsa+ ni, awia ne anadwo, mannyae sɛ mede nusu betu mo mu biara fo.+ 32 Afei mede mo hyɛ Onyankopɔn ne asɛm a efi n’adom mu no ase,+ asɛm a ebetumi ahyɛ mo den+ na ama moanya agyapade wɔ wɔn a wɔatew wɔn ho nyinaa mu.+ 33 M’ani mmeree obiara dwetɛ anaa sika anaa atade.+ 34 Mo ankasa munim sɛ nsa yi na ama me ne wɔn a wɔka me ho no anya nea yehia.+ 35 Mada no adi akyerɛ mo wɔ ade nyinaa mu sɛ etwa sɛ moyɛ adwumaden+ saa de boa wɔn a wɔyɛ mmerɛw+ no, na ɛsɛ sɛ mokae asɛm a Awurade Yesu ankasa kae no sɛ, ‘Ɔma+ mu wɔ anigye pii sen ogye.’” 36 Na ɔkasa wiei no, ɔne wɔn nyinaa buu nkotodwe+ bɔɔ mpae. 37 Nokwarem no, wɔn nyinaa sui yiye, na wosusoo Paulo kɔn+ mu few n’ano,+ 38 efisɛ asɛm a ɔkae sɛ wɔrenhu no+ bio no yɛɛ wɔn yaw yiye. Enti wogyaa no kwan+ de no kɔtenaa hyɛn no mu.
^ Anaasɛ, “nhyɛsofo.”
Asomafo Nnwuma 20